တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့် & အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ခုတော့ရှိသင့်ဆိုတာဘာလဲ
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်: ဒါဟာဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုမှာရှိပါသလား?
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပထမဦးဆုံးအရာ ကမ်းလွန်ဘဏ် ကလမ်းပေါ်ကိုဆင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှာအလွန်ဆင်တူသည်။ သင်အွန်လိုင်းသင့်အကောင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်နှင့်ထွက်ဘဏ်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း transmit နိုင်ပါတယ်။ အတော်များများကကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများကသင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်အကောင့်သို့လင့်ထားသည်နိုင်သောကမ်းလွန်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုဆက်ကပ်။
သင်သိသည့်အတိုင်း၊ ဒေသခံအကောင့်တစ်ခုသည်သင်၏အမည်နှင့်အတူ cubby တွင်းထဲသို့ထည့်ထားသောစက္ကူငွေကြေးအနည်းငယ်ဖြင့်မပါဝင်ပါ။ သင်၏ဘဏ်အကောင့်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆာဗာများပေါ်တွင်အရန်ကူးထားသောဘဏ်၏ကွန်ယက်ပေါ်ရှိကွန်ပျူတာဒေတာသာဖြစ်သည်။
သငျသညျအားလပ်ရက်အပေါ်အခြားတိုင်းပြည်သွားရောက်သင့်ပါတယ်, သင်ဆဲအလားတူပင်စသည်တို့ကို, ရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်, သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်, သင့်ဘဏ်အကောင့်နိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ပျူတာကုဒ်ပါဝင်ပါသည်; ဖြစ်နိုင်ဖွယ်သင့်ရဲ့ဖော်ရွေရပ်ကွက်အတွင်းဘဏ်အဖြစ်အတိအကျတူညီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကွန်ယက်ပေါ်တွင်တက်ကျောထောက်နောက်ခံ။
ဒါကြောင့်သင်ကထောင့်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အခြားဘက်ခြမ်းကဆင်းဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာရှိမရှိအရေးမထားဘူး။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင့်ပိုက်ဆံအတူတူပင်အရပ်၌ရှိ: တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကွန်ယက်ပေါ်မှာ။
ဘဏ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ, ဘဏ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရ။ အဲဒီဘဏ်ပြည်ပမှာထံမှငွေထုတ်ကိုလက်ခံနိုင်မီကအချို့သောဘဏ္ဍာရေးစိတ်ဖိစီးမှုစစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘေလီဇ်, နေးဗစ်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစု, ဆွစ်ဇာလန်ဒါမှမဟုတ်ကေမန်ကျွန်းများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း transmit နိုင်ပါတယ်အတွက်ဘဏ်မတိုင်မီကယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးကိုအမေရိကန်သတင်းထောက်ဘဏ်ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်သတင်းထောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမျိုးရယူအချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုသယ်ဆောင်။ ဥပမာအားဖြင့်, ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအစွမ်းသတ္တိကိုအချိုးတင်းကျပ်သောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသောအမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းမှသက်သေပြရပါမည်။ ထို့အပွငျကစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမိန့်တွင်ဤစစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဤတရားစီရင်မှု၏အသီးအသီးအတွင်းတွင်တိကျခိုင်မာစွာအစိုးရစည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ တဦးတည်းခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းလိုအပ်ချက်ဘဏ်များငွေထုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာမခံထားနိုင်ရန်အတွက်သိသိသာသာမြို့တော်သိုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ထို့အပွငျအားပြိုင်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဘဏ်တွေ audit ။ ဒါကဘဏ်တွေလိုက်နာမှုအတွက်ကျန်ကြွင်းသောအာမခံထားနှင့်ဤလူကြိုက်များဘဏ္ဍာရေးစင်တာများ၏ဂုဏ်သတင်းထောက်မှကူညီပေးသည်။ ဘဏ်ချေးငွေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်လိုအပ်သောအရေအတွက်ပမာဏကိုနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သုံးလတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒါရိုက်တာရယူနိုင်မီ Plus အား, ဘဏ်တာဝန်ရှိသူများကအထူးကြပ်မတ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများရှောက်သွားရကြမည်။
Standard & စည်းမျဉ်းများ
ဘဏ်များများအတွက်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းမူဘောင်ရှိပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ဘဏ်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေခြားမြေခြားရန်ပုံငွေများထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက်လိုက်နာရရန်စံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဘေဆယ် III ကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါဘေဆယ် III ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ၏အသေးစိတျအစုဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်အပေါ်ဘေဆယ်ကော်မတီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဤစံတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, ကြီးကြပ်မှုနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတူညီချက်ခိုင်မာအောင်နှင့်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတိုင်းတာ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အောက်ပါလုပ်ဖို့ဖြစ်၏
ဘဏ်များ '' င့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ကိုခိုင်ခံ့စေ
ဘဏ်များအရပျ၌ရှိရမည်သောအရည်လွှမ်းခြုံအချိုးနှင့်အန္တရာယ်စောင့်ကြည့်ရေး tools တွေကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါသည်။ ဒါဟာသေချာတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း unencumbered အရည်အသွေးမြင့်အရည်ပိုင်ဆိုင်မှု (HQLA) ၏လုံလောက်သောငွေပမာဏရှိကြောင်းအောင်ဖွငျ့ဤစုံ။ ဤဘဏ်ကိုအလွယ်တကူနှင့်ချက်ချင်းငွေသားသို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများထို့နောက် 30 ပြက္ခဒိန်ရက်ကြာငွေဖြစ်လွယ်စိတ်ဖိစီးမှုမြင်ကွင်း၎င်း၏ငွေဖြစ်လွယ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကစျေးကွက်မှဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Net ကတည်ငြိမ်သောရန်ပုံငွေရှာခြင်းအချိုးလိုအပ်ချက်ရှိရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားစံချိန်စံညွှန်းများရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လုံခြုံတဲ့ရန်ပုံငွေပရိုဖိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘဏ်များလိုအပ်သည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်။ သန်း 2.7 ကျော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေသတင်းများအရရှိ ကမ်းလွန်အကောင့်အသစ်များ၏။ ကမ်းလွန်ဘဏ်ဖွင့်ထိပ် 1% မဟုတ်ပါ။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ်းလွန်အမျိုးမျိုးသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူလိုသောမည်သူမဆိုနှင့်လူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အတော်များများကနိုင်ငံခြားဘဏ်များအနိမ့်သိုက်နိမ့်ဆုံးကိုဆက်ကပ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကကမ်းလွန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှရန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် option ကိုများအတွက်ပါစေ။
တစ်ခုရှိခြင်း၏ထိုမှတပါး, အကျိုးကျေးဇူးများ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် လမ်းကအခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကျော်လွန်သွားပါနှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပုန်းအောင်း။ ဤရွေ့ကားအကျိုးခံစားခွင့်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အလွန်ကြီးသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေး, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, အဆင်ပြေခြင်း, စိတ်၏ငြိမ်သက်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုလုပ်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစံဖြေရှင်းချက်ကြောင်းထင်ရပေသည်။ ပျောက်သင့်ရဲ့ပြည်တွင်းအစိုးရအနေဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားရန်အခြို့သောဝေးလံသော, ပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေးအခွန်ရှောင်မှုကိုအစီအစဉ်အဖြစ်နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ စနစ်တကျပြုမိသည့်အခါဆန့်ကျင်တွင်ကဥပဒေရေးရာကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူအားလုံးကိုဆန္ဒရှိမှရရှိနိုင်မယ့်, အစစ်အမှန်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။
အတော်များများကအမေရိကန်တွေကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းကယ့်ကိုသည်အဘယ်အရာကိုသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ချင်တော့ယခုကအကြောင်းအမှန်တရားသင်ယူခြင်းစတင်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းသင်နေထိုင်ရသောတထက်ကွဲပြားခြားနားသောလူတမျိုးအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏အသုံးချလျက်ရှိ၏ အများဆုံးလိုလိုလားလားတစ်ဦးခိုင်, တည်ငြိမ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၌တည်၏။ ကမ်းလွန်ဘဏ်မှမြောက်မြားစွာဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ။ ဒါက doldrums အတွက်စီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဥပမာ USA ၌ရှိသကဲ့သို့, ကြွေးမြီအတွက်နက်ရှိုင်းစွာသောအစိုးရမှချည်ထားသောဆင်းရဲသားဖက်ဒရယ်အရံစနစ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာဝါရှင်တန်အပြန်အလှန်၏ကျရှုံးခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုပျက်ကွက်အကျယ်အရင်းအနှီးဘဏ်တွေဖြစ်သကဲ့သို့, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ကတရားဝင် option ကိုအဖြစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်စတင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ပုံရသည်။ overleveraged အမေရိကန်နှင့်များစွာသောဥရောပဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များနှင့်အတူ, မှာအကောင်းဆုံး, သင်သည်လည်းငါတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးကြမည်, ဤအကြောင်းပြချက်မှာကြည့်ဖို့လိုပေမည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ်းလွန်သင့်ရဲ့ငွေစုဘို့ငွေကြေးအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ ဒါကလုံခြုံ, တည်ငြိမ်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုထိန်းသိမ်းဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အလွန်နည်းပါးပြည်တွင်းဘဏ်များကွဲပြားခြားနားငွေကြေးကိုင်ဆောင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာကိုဆက်ကပ်။ ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများကိုင်ဆောင်တဦးတည်းငွေကြေးအတက်အကျအတွက်ခုန်၏အားသာချက်များကိုယူခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ9/ 11 ဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက်များစွာသောလူကနေဒါဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကနေဒါဒေါ်လာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ပြောင်းလဲ။ အတော်များများကအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာအဖြစ်ချောမော 30% အမြတ် tanked နှင့်ကနေဒါတဦးတည်းကိုခိုင်ခံ့စေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမျိုးစုံနိုင်ပါတယ်ကိုင်ပြီး, အချို့ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့်အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားပြန်လာဆက်ကပ်။
ဒါဟာဝင်ငွေကွဲပြားခြားနားစီးဆင်းမှုဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအာရှ၏စျေးကွက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်ခဲ့ပါတယ်, အမေရိကန် 2008 အတွက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွက်နေစဉ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်လည်းဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းကန့်သတ်ပြည်တွင်းမှာသင်ကန့်သတ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးမဖြစ်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ကောင်းစွာလုပ်နေတာစီးပွားရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများအသီးအနှံကိုရိတ်ရချင်ပေမည်။ တကယ်တော့သင်ကတစ်ဦးထက်ပိုနိုင်ငံခြားအကောင့်ထူထောင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်သာကိုင်သာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ပြည့်ဝ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သေချာနိုင်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဥပမာ, ဘဏ်တွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းပိုက်ဆံမန်နေဂျာအချို့နှင့်တကွကြွလာ။ ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစီမံတိုးတက်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးများစွာသောပေါင်းစပ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အစုစုကိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်တစ်နေ့ကုန်သည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက်အရောင်းအများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်။ ထရေးဒင်းကမ်းလွန်ဒီဦးထုပ်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
US မှာဘဏ်များပုံမှန်အားဖြင့်သိုက်အပေါ်အလွန်နိမ့်အတိုးပူဇော်။ သငျသညျဇန်နဝါရီလ $ 1,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ကလက်ရှိစျေးကွက်နှုန်းထားမှာ, သင်တစ်နှစ်သာ $ 10 အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေမည်။ တချို့ကစိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်တုန်လှုပ်, သူတို့ရဲ့ငွေစုအပေါ်မဆိုငွေပမာဏစေလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအခြို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကမ်းလွန်သင့်ရဲ့သိုက်အပေါ်အချို့သောသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အတိုးနှုန်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သင်ရုံတစ်ဦးတည်းကဒီအကျိုးကျေးဇူးအပေါ်အခြေခံပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်စေရန်လုံလောက်သောအကျိုးစီးပွားစကားပြောနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသြစတြေးလျ, ဆွစ်ဇာလန်, နယ်သာလန်နှင့်ပြင်သစ်အဖြစ်တည်နေရာများကိုသင်၏သိုက်အပေါ်ကြီးစွာအတိုးနှုန်းပူဇော်စေခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအချို့မှနေအိမ်အဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည် အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။
သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကွဲပြားစုံလင်နှင့်အတူပင်သေးငယ်တဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်ရှိခြင်းကိုသင်လျင်မြန်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ လိုအပ်ပါကကမ်းလွန်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ, ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေကိုရွှေ့ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်သောဖြစ်လာရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအပေးအယူအပေါ်ပုံမှန်အရောင်းအရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအအခြေခံနှစ်ယောက်စလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။
ဤအလိုင်းများတလျှောက်, ငါတို့သည်လည်းပြည်တွင်းဘဏ်များကိုမကြာခဏအလွန်ကြီးမားထုတ်ယူဘို့လက်ပေါ်မှာအလွန်ကန့်သတ်ရန်ပုံငွေများစောင့်ရှောက်သောသင်တို့သိကြ၏။ ဤသည်အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးဝင်ရောက်ဖို့ကသိပ်ခက်ခဲစေသည်။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုကဒီမှာန့်အသတ်များကဒီမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌သေစေလောက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာမြောက်မြားစွာအခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအအရေးကြီးသနည်း ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ သငျသညျလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေထုတ်ယူလို့မရပါဘူးလျှင်အဘယ်သို့နည်း, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဘဏ်တစ်ခုကိုအပ်သည်အထိသင့်အကောင့်အေးခဲဖို့လိုလားတဲ့သူကိုသင်နောက်ကွယ်မှလိုင်းအတွက်ရှေ့နေရှိစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်အကောင့်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်၏လက်ခညျြမနှော။ သငျသညျအလျင်အမြန်သင်တို့ငွေကိုရွှေ့နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဂေါပကသင်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ခုထက်ပိုသောဘုံအထငျမှားအခွန်လူထဲကပိုင်ဆိုင်မှုပုန်းအောင်းနေသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များပုံမှန်အားအခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပွင့်လင်းကြသည်အဖြစ်အမှန်တကယ်မှာတော့ဒီခဲမှန်သည်။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်အသုံးချဖို့အခါ, ကန့်သတ် privacy ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အခြို့သောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ မဆိုအမေရိကန်နေရာပြောင်းရွှေ့ $10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ထိုထက်မကအချိန်မရွေးသတင်းပို့ရမည်။ သို့သော်၊ 10,000 USD အောက်အောက်ရှိသောအကောင့်တစ်ခုရှိရန်အကြောင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားအကောင့်တွင်လက်မှတ်ထိုးသူဖြစ်ပါကသင်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အခွန်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပြောဆိုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
တစ်ဦးကပိုပြီးလုံခြုံဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံက။ အမေရိကန်ဘဏ်များထောက်ခံသောဖက်ဒရယ်အရံစနစ်, အလှည့်၌, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးကြွေးမြီ-စီးတိုင်းပြည်များကကျောထောက်နောက်ခံပြုနေပါတယ်။ ထို့အပြင်ထိပ်တန်းဘဏ္ဍာရေးမြေားကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ၏စာရင်းဖြန့်ချိပြီ အရာတစုံတခုကိုမျှအမျိုးသားရေးအမေရိကန်ဘဏ်များရှိကြ၏။ လုံးဝအဘယ်သူအားမျှ။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ကနှစ်တိုင်း 50 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များ၏စာရင်းတစ်ခုလွှတ်ပေးရန်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးမဂ္ဂဇင်းကိုယူပါ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်ဖွယ်အရာကမဆိုကြီးမားသောအမေရိကန်ဘဏ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရေးအသား၏သကဲ့သို့, "အလုံခြုံဆုံး" စာရင်းတွင်တစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်ဘဏ်များသုံးအသေးစားလယ်ယာစိုက်ပျိုးဘဏ်များဖြစ်ကြောင်း, သူတို့ကနံပါတ်များကို 30, 45 နှင့် 50 မှာစာရင်းပြုစု။
အထက်ပါနိုင်ငံများ, သာဆွစ်ဇာလန်နှင့်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံခရီးရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအကောင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ နိမ့်ဆုံးသိုက်အများအပြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နောက်ဆုံးမှာလူတစ်ဦး၌သင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါလာကြပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတကာကသို့သော်သူကသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံနှင့်အတူမ (နှင့်မ) Gamble ကျင့်သောအနိမ့်ကြွေးမြီနိုင်ငံများရှိဘဏ်များကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်။ အကျိုးဆက်သူတို့သည်သင်၏ထုတ်ယူဘို့လက်ပိုငွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ သငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုလုပ်ထားသည့်အခါဘယ်မှာသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံရပ်လိုမလဲ ငွေသားအတွက်ရေကူးနေတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်? သို့မဟုတ်ကြွေးမြီတရေနစ်သေဆုံး? ထိုကဲ့သို့သောဆွစ်ဇာလန်နှင့်လူဇင်ဘတ်အဖြစ်နိုင်ငံများတင်းကျပ်ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဘဏ်ငွေစာရင်းအလေ့အကျင့်ပေါ်တွင် "စစ်ဆေးမှုများနှင့်ချိန်ခွင်" အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ များစွာသောအခြားကမ်းလွန်ဘဏ်နှင့်နိုင်ငံများနှင့်ဆင်တူစနစ်များရှိသည်။ ဤရွေ့ကားစနစ်များကမ်းလွန်ဘဏ်ရှာဖွေနေကြသူလူပေါင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဒါလုပျနိုငျကိုသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။
ထို့အပြင်, များစွာသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျွမ်းကျင်သူများသင်ကမ်းလွန်ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအခါသင်ပြည်တွင်းမှာတရားစွဲမှုမှလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သငျသညျကိုသူတို့သိမ်းယူရန်သင့်ပြိုင်ဘက်များအတွက်ခက်ခဲနေကြသည်ကမ်းလွန်အကောင့်အသစ်များ၏၌သင်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးအတုံးတက်ချည်နှောင်လျှင်ဆိုလိုသတည်း။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံခြားဘဏ်များ၌ထိုင်နေကြသည်လျှင်လျှပ်တပြက်အတွင်းသင်၏အကောင့်အေးခဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုပိုမိုခက်ခဲသည်စိတ်ကိုထား။ ရေရှည်လုံခြုံရေးအတွက်, ကျွမ်းကျင်သူများအနေနဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုကိုင်ပြီးအကြံပြုပါသည်။ အဲဒီကိရိယာအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုင်ပြီး privacy ကိုပေးဘူးမသာ။ တရားရုံးအမိန့်ရန်ပုံငွေ၏ပြန်ပို့တောင်းဆိုနေပြီလျှင်သူတို့ကအစသိသိသာသာဥပဒေရေးရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့် Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
ဤသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်တွေကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်တင်ထားရန်အဘို့အဒါဟာ ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာနေသည်။ ဤအချက်အလက်အလွန်အမင်းဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဘဏ်ကိုရှာဖွေထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးမြန်းဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပံ့ပိုးပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘဏ်တွေကနိုင်ငံခြား clients များကိုလက်ခံလတံ့သောသင်တို့သိကြ၏။ ကျနော်တို့အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အသောဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်နေကြသည်ဟုခံစားရပေးသောဘဏ်များအပေါ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
အမေရိကန် client များအတွက်ရရှိနိုင်။ အားလုံးဘဏ်များနေဆဲ, အမေရိကန်ကနေဒါနှင့်ဥရောပ clients များကိုလက်ခံမ။
အဝေးမှအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်စွမ်းရည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဖုန်းကျော်ကအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန် client များအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်သောအချို့သောနိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်တွေရှိပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, သငျသညျကိုလည်းတရားဝင်လိုအပ် Know-သင့်ရဲ့-client ကိုစာရွက်စာတမ်းများပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားဘဏ်များကိုသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့ဘဏ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းလိုအပ်သည်။ သောသူတို့ကိုဘဏ်တွေအချို့ပြည်တွင်းအခက်များရှိသည်, ကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောသင်ဒေသခံဌာနခှဲကတဆင့်ပင်လယ်ရပ်ခြားအကောင့်ဖွင့်တင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြဿနာကိုအမေရိကန်တရားရုံးဒေသခံကိုင်းအခက်ကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်နေရာများသက်ဆိုင်ရာကြပါဘူးတဲ့ဘဏ်သုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အနိမ့်နိမ့်ဆုံး။ အများစုမှာဘဏ်များ (ထိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအဘို့အဝင်) အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်မယ့်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်အဘို့အကြောင်းပြချက်အတွင်းနိမ့်ဆုံးနဲ့ဘဏ်ရှာချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေသခံ clients များအဖြစ်နိုင်ငံခြား clients များရှိသည်သောဘဏ်များ။ သငျသညျဒေသခံများမှန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဘဏ်ကောင်းစွာစိစစ်ခံရဖို့သွားကြောင်းစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ သာနိုင်ငံခြား clients များရှိကြောင်းတစ်ဦးကဘဏ်ကမကြာခဏa"ကို Class B" ဘဏ်ဟုခေါ်သည်။ ဤရွေ့ကားဘဏ်များပိုမိုလွယ်ကူစွာအားပြိုင်မှုများကသတိမမူနိုင်ပါသည်။ "Class A" ဘဏ်များပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးငွေထုတ်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။
အတော်များများကနိုင်ငံခြားဘဏ်များတင်းကျပ်သော privacy ကိုဥပဒေများရှိသည်နှင့်အကောင့်အချက်အလက်ထုတ်ဖော်ကြပါဘူး။ အခွန်အစီရင်ခံသို့သော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံသားများအဘို့အခြို့သောပုံစံများကိုဖြည့်စွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာကသူတို့ကိုအမေရိကန်အခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်လျောကူညီပေးသည်။ အဆိုပါတာဝန်ကိုလည်းစနစ်တကျပြုလုပ်အစီရင်ခံရန်အကောင့်ကိုကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူတည်ရှိသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့် setting သည့်အခါသင်တို့သည်လည်းစိတ်တွင်အခြေခံအခွန်ဥပဒေများသိမ်းထားချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလမ်းဖြင့်, ဒီအထောက်အကူဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်ကိုသာမဟုတျဘဲအခှနျအကွံဉာဏျဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးလိုင်စင်ရစာရင်းကိုင်ထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြာလော့။ ကပြောသည်ခံအကြောင်း, ဒါကြောင့်အမေရိကန်တွေစိတ်တွင်အောက်ပါစောင့်ရှောက်သောအကြံပြုသည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ ဒါဟာသင်သည်သင်၏ဝင်ငွေပေါ်နိုင်ငံခြားအခွန်ပေးဆောင်လျှင်ပင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ yonder ကျော်ပိုက်ဆံ Keeping နှင့်သင်ပြန် 1964 အတွက်စဲစေသောအခါမှသာအခွန်ပေးဆောင်ခြင်း။ ကျယ်ပြန့်ရှယ်ယာရှင်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူအကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းကဒီနှင့်အတူကွယ်ပျောက်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်မရတစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်နီးကပ်စွာကျင်းပကော်ပိုရေးရှင်း။
သငျသညျ $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာကျော်လွန်မဆိုနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်အကောင့်သတင်းပို့ဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာမှဖြည့်စွက်သည်။ သငျသညျတသောင်းဒေါ်လာကျော်လွန်ကာကမ်းလွန်အကောင့်ရှိပါကသင်တစ်ဦး FBAR ပုံစံ file ရန်ရှိသည်။
အတိုးဝင်ငွေ။ သင်နှစျအတှငျးသည့်အချိန်တွင်မဆိုအခွန်တစ်နှစ်သို့မဟုတ် $ 50,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် $ 75,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်ပိုမိုမြင့်မားမဆိုနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မဆိုအကျိုးစီးပွား (ဝင်ငွေ, ဆုံးရှုံးမှု, အကျိုးအမြတ်, ဖြတ်တောက်, ရရှိသောနှင့်ဖြန့်ဖြူး) ရှိပါက, သင်ဖို့ရှိသည် တစ်ဦး Form ကို 8928 file ။
လျြောသင့်ရဲ့အခွန်အစီရင်ခံဘို့ပြစ်ဒဏ်များနှင့်အကျိုးစီးပွား။ အခွန်ရှောင်မှုကိုအပေါ်ကန့်သတ်မရှိပညတ်တော်ရှိပါသည်။ ပြစ်ဒဏ်များ $ 10,000 ကနေရာပေါင်းများစွာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အထိနိုင်ပါတယ်။ အခွန်ရှောင်မှုကို, မှားယွင်းသောအစီရင်ခံနှင့်အစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်ခိုင်မာသောပြစ်ဒဏ်များသယ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးအခွန်ဥပဒေများနှင့်လိုက်လျောရန်သေချာစေပါ။
ဘေးဖယ်ကြောင့်အားလုံးထံမှ, သငျသညျမြားကိုလညျးအဘယ်သူမျှမဘဏ်လူတိုင်းအတွက်ညာဘက်ကြောင်းကိုသိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေထုတ်ယူဖို့လွယ်ကူလက်လှမ်းနှင့်အတူမြင့်မားအရင်းအနှီးဘဏ်တွေလိုအပ်နေချိန်မှာ, အခြားသူများ "ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" အကြိုးခံစားခှငျ့ကိုရှာလိမ့်မည်။
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, ကမ်းလွန်ဘဏ်အခွန် evading သို့မဟုတ်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပုန်းအောင်းအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် vexatious တရားကနေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကများစွာသောလူရိုးရှင်းစွာအဆင်သင့်သည်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများအနေဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့ကမ်းလွန်အကောင့်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ပေါ်တတ်သကဲ့သို့, တကယ်တော့ကမေးခွန်းတစ်ခုကိုလျော့နည်းပုံရသည် "ငါ့အဘို့နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းလား?" နှင့်ပိုပြီး "ညာဘက်ကိုငါ့အဘို့ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းလား?" ဒါဟာအချို့ fluke မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကမတည်ငြိမ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကြွေးမြီအတွက်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်; လူအရဲ့ပိုက်ဆံမှတဆင့်မီးလောင်သောကြောင်းအစိုးရ။
ဤအတောအတွင်းဖက်ဒရယ်ရံဖရိုဖရဲ၌တည်ရှိ၏။ သငျသညျမဟုတ်ရင်ထင်ရှိလျှင်, ကြွေးမြီအတွက်နက်ရှိုင်းသောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုနိုင်ငံများတွင်ညီမျှအေဂျင်စီများနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်။ စင်စစ်မေးခွန်းကမ်းလွန်ဘဏ်ဘေးကင်းလုံခြုံရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မှုမရှိတော့ပါ။ ကျနော်တို့တောင်းဆိုနေတာရပါမည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ဥပဒေရေးရာ, စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးကျေးဇူးမှအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘယ်လုံခြုံကမ်းလွန်ဘဏ်?
ကမ်းလွန်ဘဏ် တိုးမြှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းအတော်များများတဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်ဤလျှို့ဝှက်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူပါ။ အမေရိကန်နေထိုင်သူများကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာအားဖြင့်ဤလူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့တူညီသောဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကွာရှင်း, တရားစွဲမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲကနေသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံကာကွယ်ခြင်းသည်အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမြင့်ဆုံး privacy နဲ့လုံခြုံရေးပေးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်၏နာမ၌ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာရေးအကောင့်သို့၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံသွင်းထားသူကိုအမေရိကန်များ၏နံပါတ်တစ်ကွဲပြားမြင့်တက်ရှိပါသည်။ ဒီအရေးအသား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘာသာရပ်အပေါ်နားလည်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
အများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တရားစီရင်မှုတင်းကျပ်လျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းရှိသည်။ ဤသူတို့သည်ငွေထုတ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အထောက်အထားတွေကိုအဖြစ် related အရောင်းအလျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာကူညီနိုင်ဖို့ရာအရပျ၌ရှိကြ၏။ ဒါကပေါ့ပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့မဟုတ် prying မျက်စိသည်သင်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုသို့ delve နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလျှို့ဝှက်နီးပါးဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကအကြွင်းမဲ့အာဏာရဲ့ privacy နဲ့ anonymity ကိုအာမခံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ အားလုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့သွယ်ဝိုက်ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရားရှိသည်။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကသတင်းပို့ခြင်းနှင့်သံသယလေးနက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုက်နာရန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသင်တန်း၏, အကြမ်းဖက်ဝါဒ, ငွေကြေးခဝါချမှု, သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်မှု၏အသီးအပွပါဝင်သည်။
သို့သော်ဖြစ်ရပ်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်မပါဆွဲဆောင်မှုရာဇဝတ်မှုစွပ်စွဲရှိသေး၏။ ဒီတော့ငွေထုတ်သတင်းအချက်အလက်တစ်ဦးမနာလိုဖက်ရှင်အတွက်စောင့်နေပါတယ်။ ဤ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တရားစီရင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်အစွမ်းကုန်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်တရားစီရင်ရေးငွေထုတ်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အစေခံနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းတရားကနေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပြောပြတယ်အဖြစ်လျှို့ဝှက်၏ဤအဆင့်မြင့်အထူးသဖြင့်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောကွာရှင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် estates အဖြစ်အရပ်ဖက်ကိစ္စရပ်များတရားရုံးထဲမှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာလျှို့ဝှက်သို့မဟုတ်ငွေထုတ်သတင်းအချက်အလက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်ဘဏ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကအစဉ်အလာမှသာဒါတုံ့ပြုမိနှင့်တောင်းခံအစိုးရအေဂျင်စီနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းအချို့တိကျခိုင်မာစွာစာမေးပွဲများနှင့်အတူပါပွီ။ လျှို့ဝှက်အတွင်းပေါက်ကြားသို့မဟုတ်လပ်ချိန်မဆိုယောင်ကိုအခြားအလားအလာအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖျက်ဖို့အစေခံလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ထိုသူတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ဆုံးရှုံးဖို့မတ်တပ်ရပ်မယ်။
အမည်မဖော်များနှင့်လျှို့ဝှက်၏တောင်မှပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်တင်းကျပ်အဆင့်ဆင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBCs) သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ကိုးစားအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု-ကိုင်ပြီးယာဉ်များမှတဆင့် privacy ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကိရိယာရိုးရှင်းစွာနှိုင်းယှဉ်ကာကွယ်မှုတောင်တို့ပူဇော် "ဟုဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်။ "
အဆိုပါ ရည်မှန်းချက် တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ရှာနေမည်သူမဆို၏ဤဖြစ်သင့်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အမည်ဝှက်, လုံခြုံရေးနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအကြားသင့်လျော်သောချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်ဖို့ကလမ်းညွှန်မှုရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုအဖြေရှာရန်အကြံပေးတစ်ဦးကိုင်ရဖို့သေချာပါစေ။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လူကြိုက်များတရားစီရင်မှုကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်များအတွက်အများဆုံး privacy ကိုပူဇော်သောတရားစီရင်မှုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပံ့ပိုးပေးကဲ့သို့တူညီသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်သေချာပေါက်မရှိကြပေ။ တဦးတည်းနေတဲ့မာစီဒီးမော်တော်ယာဉ်မောင်းပေမည်။ သို့သော်ကားကမာစီဒီးကားတာယာများမည်မဟုတ်။ ဒါဟာပိုပြီးဝက်ဝံ Goodyear, Firestone, Michelin တာယာများ၏သည့် Continental မည်။
အလားတူပဲ, သင်အကောင်းဆုံးဥပဒေရေးရာ tools များနှင့်အတူတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြခငျြပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသောအကောင်းဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြခငျြပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်နေးဗစ်၏ကျွန်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရှိဘဏ်အတွက်ကုမ္ပဏီရှိနိုင်ပါသည်။ နေးဗစ်ကုမ္ပဏီဥပဒပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံး privacy ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ငွေကြေးသီးသန့်တည်ရှိမှု၏အပြင်းထန်ဆုံးပေါင်းစပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ညာဘက်ပေါင်းစပ်တည်ထောင်နိုင်ရန်အရေးကြီးသည်။
OffshoreCompany.com ကမ်းလွန်န်ဆောင်မှုအတွက်ကမ္ဘာကအခွင့်အာဏာသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိသတ်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်အထူးပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1906 ကတည်းကမှာခဲ့တယျ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချကမ်းလွန်န်ဆောင်မှုနည်းပြ၏အကူအညီရှာမည်သည့်အလားအလာ client ကိုတိုက်တွန်းကြသည်။ သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံကို အသုံးပြု. အဆက်အသွယ်စေနိုင်သည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မှာ alternate နှင့်ဥပဒေရေးရာ option ကိုပေးပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီ 1906 ကတည်းက "အဲဒီမှာခဲ့" လျက်ရှိသည်။
ရောဘတ် Kiyosaki, ကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းရှင်, ဘဏ္ဍာရေးပညာပေးနှင့်နယူးယော့ Times သတင်းစာအရောင်းစာရေးဆရာကဒီကပြောကြားခဲ့သည်။ "သင်တစ်နေရာရာသွားချင်လျှင်၎င်းသည်ပြီးသားရှိခဲ့သည်သူတစ်ဦးကိုရှာဖွေအကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ " ငွေရေးကြေးရေးအအောင်မြင်သောကလူစကားမပြောတတ်သည့်အခါကနားထောင်ဖို့မကြာခဏအလွန်ပညာရှိဖြစ်၏။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, 2.7 သန်းအမေရိကန်တွေကမ်းလွန်အကောင့်မှာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံရှိသည်။ ရောနှောအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားများ, ချမ်းသာကြွယ်ဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်နာမည်ကြီးတွေ၏အားသာချက်ယူ ကမ်းလွန်ဘဏ် အခွင့်အလမ်းများ။ ဒီနံပါတ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏အဆိုအရသိရသည်ပြည်ပမှာနေထိုင်နေနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဟာ 7.6 သန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေချန်လှပ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီစုစုပေါင်းမပါဝင်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတဝိုက်နေထိုင်နေအမေရိကန်စစ်ဘက်ကလူအရေအတွက်ကိုဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နိုင်ငံရပ်ခြားနထေိုငျကာပြည်ပရှိလျှင်ဒါဟာအရေးမထားဘူး။ မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်, လူအများစုတရားဝင်အနေနဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်ရှိခြင်းမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေး Unsavvy အမေရိကန်
US မှာနောက်ဆုံးပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေးဘေးအန္တရာယ် 2008 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းအကြီးဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအချို့ဒေဝါလီခံသွား၏။ ဤသည်အမေရိက၏အလုပ်လုပ်သောလူအပေါ်ကျူးလွန်လိမ်လည်အလေ့အထများကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းက Shockwave စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ငွေစုနှင့်ပင်စင်လစာအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကပ်ဆိုးကြီးအပေါ်ကိုစတင်ရန်ရှိခြင်း, ဖဲ့များစွာသောလူထားခဲ့တယ်။ သူကားအဘယ်သူကြောင့်နောက်တဖန်အဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ဟုပြောလား
ကြောင်းခြင်းမပြုမီ, အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် 2000 အတွက်ပျက်ကျသွားသည်။ သငျသညျမှတ်မိအဖြစ်ဤ ", dot com ပူဖောင်း" ဟုအဆိုပါအဖြစ်မဟုတ်ရင်လူသိများခဲ့သည်။ ထိုအခါအောက်တိုဘာလ 19, 1987 အပေါ်သည်ဟုကျော်ကြားသောနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။ ကြှနျုပျတို့သညျ "Black ကတနင်္လာနေ့က" နေ့စွဲကိုပဌနာနှင့်အမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးတစ်ရက်ဘဏ္ဍာရေးပြိုလဲခဲ့သည်။ ဒါဟာစျေးကွက်ကနေပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်ဘီလီယံခန့် 500 ကျော်ဒေါ်လာခဲ့သည်။ ကြောင်းမတိုင်မီကအကြီးဆုံးလူသိများတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါ 1929 အတွက်မဟာစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဖျက်ဆီးကြောင်းကိုယခုပြီးတော့အကြားအများအပြားကျဆင်းမှုဤဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင်အမေရိကန်ဝေးများကကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံး In-ကြွေးမြီနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားကြွေးမြီဆူပူအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအဖြစ်, United States မှာအများအပြားကိုပိုမိုဘဏ္ဍာရေးကပ်ကြီးများ၏အလေးသာလွန်းလုပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဘဏ်များ၏ပြိုကျ ... ပါဝင်သည်။ သငျသညျကိုကယ်တင်ရန်မ FDIC အပေါ်အားကိုးမနေပါနဲ့။ အဆိုပါဖက်ဒရယ်အပ်ငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်း (FDIC) အမေရိကန်ဘဏ်များအတွက်ငွေထုတ်ရန်သိုက်အာမခံပေးမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာဟုတ်ကဲ့, ကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာအကြွေးနိုင်ငံတွင်အများဆုံးအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု၏, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဆိုပါသူဌေးများနှင့်အသိပေးထားသော Do ဘယျသို့ပွု
ဒါဟာကျယ်ပြန့်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအစုစုကွဲပြားစုံလင်တဲ့သွားကြဖို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ကြောင်းလူသိများသည်။ စတော့ရှယ်ယာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေနှင့်အိမ်ခြံမြေသို့သင်တို့ငွေကိုချပြီးပျမ်းမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဘို့ကိုသာအနည်းငယ် options များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါငျးတို့သယူအက်စ်အေ၌ရှိကြ၏လျှင်မူကား, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်တွင်းပေါက်ကြီးကဆင်းဆွဲနိုင်ပါသည်။ အခြားအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးပြိုလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်၎င်းတို့၏မူလတန်ဖိုးရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှကျုံ့နိုင်ပါ။
အဘယျသို့ကတခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု options များရှိခဲ့သည်ဆိုပါက?
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအစုစုကို, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမြားနှငျ့မျိုးစုံပိုမိုနည်းလမ်းများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်? ထိုမှတပါး, သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏အစွမ်းကုန်လျှို့ဝှက်ရှိခြင်း၏ဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေခဲ့မယ်ဆိုရင်?
ဒါကဘယ်မှာလဲ ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် အထဲဝင်ပါ။
ကမ်းလွန်အကောင့်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရုံကိုဘယ်လိုသိသိသာသာသက်သေပြရန်အတွက်, ကျော် $ 32 ထရီလီယံဒေါ်လာကမ်းလွန်အကောင့်ထဲမှာထည့်ထားပါပြီ။ နားလည်တတ်ကျွမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကအမေရိကန်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံ secure ဖို့ရာအရပျ "ကိုသွားပါ" ရသေးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ တကယ်တော့အဖြစ်ဝေးလုံခြုံဘဏ်များသက်ဆိုင်ရာကြသည်အတိုင်း, အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဘဏ်များ၏စာရင်းအပေါ်ညံ့ဖျင်းအဆင့်။
ကျွန်တော်အထက်တွင်တောင်းသည်အတိုင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစာရင်းအရသိရသည် "ဒီကမ္ဘာ့အ 50 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များ 2015" ဟုအမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ၏စာရင်းအပေါ် #30, #45 နှင့် #50 အဆင့်! အဆိုပါသေးငယ်တဲ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးဘဏ်များ, AgriBank, CoBank နှင့် AgFirst စာရင်းဖွဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်ဘဏ်များဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအသုံးပြုကြောင်းအဆိုပါဘဏ်များ, Chase, မြို့နှင့်အမေရိကတိုက်၏ဘဏ်စာရင်းအပေါ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကြသည်။
နှစ်စဉ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းက erodes ထက်သင့်ငွေအပေါ်မှာလျော့နည်းအကျိုးစီးပွားဖော်ဆောင်ရေး။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာဆင်ကန်းတောတိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံအန္တရာယ်များအခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီးခဲသင်သည်သင်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်နေ့တိုင်းတကယ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ သင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ငွေရေးကြေးရေးတာဝန်ရှိဖက်ရှင်အတွက်ဥပဒေကြမ်းများနှင့်လုပ်ရပ်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ သငျသညျကိုကျော် left and save (နှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ကရုဏာတော်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကြိုးစား) ရှိသည်ဟုအဆိုပါပိုက်ဆံသင့်ရဲ့အသိုက်ကြက်ဥဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အငြိမ်းစားနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရန်သင့်အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်အချိန်တွင်, လောဘကြီးရှေ့နေများကသင့်ရဲ့ဘဏ်စာရင်းတပိုင်တနိုင်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေဆပ်အေးခဲစေနိုင်သည်။ IRS ကို, ကွာရှင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုရိပ်မိ, သင်တို့တဘက်၌မရတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများ, ကလေးအထောက်အပံ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်မည်သည့်တရားသဖြင့်စီရင်သင့်ရဲ့ဘဏ်စာရင်းသင့်အောက်၌ထံမှထွက်ဝမ်းခွဲရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
တောင်မှလက်ထပ်နှင့်အလားအလာကွာရှင်းပြတ်စဲအများအပြားမှထမြောက်ကြဘူးကြောင်း, ဘဏ္ဍာရေးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး US မှာဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကဆင်းရဲသောသူကိုအိမျတျော၌သငျသညျထွက်ခွာ, တရားစီရင်ပိုင်နှင့်သိမ်းယူခြင်းမြင်နိုင်နှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
အိမ်ထောင်ရေးအဆုံးသတ်ဟုတ်ကဲ့, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းငွေရေးကြေးရေးကလူ devastates ။ ကွာရှင်းတရားစွဲဆိုမှုကောက်ချက်ချဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းသောင်းချီဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏သို့မဟုတ်ပင်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်သင် built အရာကိုတစ်ဦးမျှသာအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုငွေရေးကြေးရေးသတိဖြစ်ခြင်းသေးသည်အခြားအကြောင်းပြချက်ပေးသည်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ဥပဒေရေးရာ tools များအတွင်းတစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ရန်သင့်ပိုက်ဆံအချို့ကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့သား, သင်အန္တရာယ်ရဲ့လမ်းထဲကကထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပြည်တွင်း moochers မှဖြစ်ပေါ်နိုင်မဟုတ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။
positive ဘဏ္ဍာရေး Outlook နဲ့
မီဒီယာလေ့ "အခွန်အမိုးအကာ" သို့မဟုတ်အဖြစ်ကမ်းလွန်အကောင့်ရည်ညွှန်းထားပါတယ် "အခွန်ဟေဗန်။ " အတိတ်ကာလ၌, IRS ကိုအကြီးအကျယ်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကိုစိစစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဤမျှလောက်များစွာသောအားသာချက်များကမ်းလွန်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှိသတည်း။ အဆိုပါ IRS ကိုယခုဘဏ္ဍာရေးရှာရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ခက်ခဲစေတော်မူပြီအကျိုးကျေးဇူးများကို-နှင့် IRS ကိုက၎င်း၏ရှယ်ယာလိုသည်။
2009 ခုနှစ်, ကွန်ဂရက်နိုင်ငံခြားရေးအကောင့်အခွန်လေးစားလိုက်နာခြင်းအက်ဥပဒေ (FATCA) ကျော်သွားပြီ။ ဒါဟာပြည်ပမှာနေထိုင်နေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ IRS ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခွန်အခများ file ဖို့လိုအပ်ကြောင်း, အရင်ကဲ့သို့, ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပြည်ပမှာသူတို့နှင့်အတူဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာသူတို့၏အမေရိကန် clients များထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသစ်ကိုအဘယျသို့ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်သတင်းအများဆုံးရတယ်ဆွစ်ဇာလန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆွစ်ဘဏ်အကောင့်ခဲ့ဆဲကြီးမားတဲ့ကျော်ကြားမှုရှိပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသို့မဟုတ်ကယ်ဖို့ရာအတွက်ကြီးမြတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဘဏ်လုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်များအတွက်လူသိများသည်။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းတစ် godsend ဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်အခွန်ရှောင်မှုကိုတစ်ဦးအမေရိကန်လူတစ်ဦးကိုအပြစ်တင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့နီးပါးမိုက်မဲသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဘဏ်အစီရင်ခံရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုသောအခါ, အခွန်ရှောင်မှုကိုပြဿနာများစွာလျော့နည်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကအမေရိကန်ကလိုက်နာမှုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းစေသည်။
ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်အကောင့်အတွက်ဘဏ်ဿုံဥပဒေရေးရာကြောင်းသတိပြုပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ IRS ကိုသူတို့ရဲ့ကမ်းလွန်အမြတ်အစွန်းသတင်းပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အခှနျရာသီကာလအတွင်းလုပ်ဖို့များအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ၏ရိုးရှင်းအလွှာ။ ဒါပေမယ့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်အခွန်စည်းမျဉ်းကိုနားလည်တဲ့သူ CPAs နှင့်ရှေ့နေများကကူညီနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သူများသည်ထိုအဥပဒေသစ်များထဲမှာကောင်းမွန်စွာကိုလညျးတတျကြှမျးနှင့်ရိုးရှင်းသောအစီရင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ခေတ်အမေရိကန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကရှိသင့်ပိုက်ဆံအားလုံး Keeping ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တစ်ဦး, ခေတ်မမီတော့မလုံခြုံခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းဝတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးလိမ်လည်လှ, အကျင့်ပျက်, အကြံအဖန်စနစ်၏ကရုဏာတော်မှာသင့်ရဲ့ငွေစုကြပြီလော
တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခဲယဉ်းဘူး။ သို့သော်အဲဒီမှာမှတဆင့်ခုန်အသစ်ဥပဒေများနှင့် hoops ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်၏နံပါတ် ကမ်းလွန်ဘဏ်များ သူကား, ကနေဒါသို့မဟုတ်သြစတြေးလျငွေထုတ်အမေရိကန်ကိုလက်မခံကြဘူး။ ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏ ins-and တနေရာနှင့်အတူတွေ့ကြုံသောကုမ္ပဏီရှာအကြံပြုသည်။
သင်ပိုမိုထွက်ရှာတွေ့စိတ်ဝင်စားပါသလား? ဒီတော့လျှင်, ငါတို့သည်ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြသည်။ သင်အခုဖြည့်စွက်နိုင်တဲ့ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံရှိပါတယ်။ Plus အားသင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအတိုင်ပင်ခံစကားပြောဖို့ဖုန်းခေါ်များအတွက်နံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။ ထိုအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ကိုယူပြီးအကူအညီကိုထွက်ရောက်ရှိဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
> ကျအခနျး2မှ